Unokwanisa here kuratidza dzimwe hucks kuti ndiwedzere ma Amazon mazvigadzirwa zvekutengesa?
Kune dzimwe nzira dzekushandisa pakusimudza Amazon product sales data. Uye mubvunzo unova unotonyanya kukosha kana zvichiuya kune zvakakosha kuisa Amazon mhando nokukurumidza sezvaunogona kuti uchengetedze nguva uye ugare kunze kwemakwikwi. Heano zvimwe zvirongwa zvaunogona kuedza kuti uwane kubudirira zvinobudirira pakuisa chigadzirwa chitsva kunze uko.
Tora Bhokisi Rokushandisa muAmazon
Kukunda bhokisi rekutenga ndicho chinonyanya kukosha kuzivikanwa nezvose zvinotengesa nguva muAmazon - small security cameras. Kwete kutaura kuti ndiyo nzira bedzi yekuita basa rakabudirira rekutumira-bhizinesi, hongu, kunze kwekuti iwe usisi kugadzira kana kubudisa zvinhu zvako. Uye hazvina-brainer kuti kana iwe uchida kutora zvizhinji zvekutengesa zvakananga kune rako rekuzvitoro, unofanirwa kuratidzirwa pamusoro peji yezvigadzirwa. Ndicho chikonzero iwe unogona kuvandudza Amazon yako yekutengesa data nekunyanya kunyanya kukosha kutenga mabhokisi matsamba, zvakadai se:
Mutengo - zviri pachena, izvi ndizvo zvinoita kuti iwe ushwirirwe kune imwe vatengesi. Cherechedza, zvisinei, kuti pasinei nekutengesa kwemaAmerica kusingarangarirwi kunoratidzwa nemutengo wekutengeswa, zvimwe zvinopiwa zvingangoita sechine mari shoma kudarika vamwe - nokuti bedzi vari kuuya nemutengo usina mutengo kunze kwezvimwe zvinosanganisa mari zvinosanganisira. Asi zvishoma zvishoma kutsvaga chipo chacho kunogona kuita kuti zvinhu zvive pachena.
Kutumira Kuita - ndiyo yechipiri inonyanya kukosha Amazon product sales data. Inosanganisira seti yemamatriki evanhu, pamwe nenhamba huru muODR (Dheerera Defect Rate - kubvisa, kudzoka, kana kuti zvisina kukodzera kutengesa chikwata, kusanganisira chero mhinduro isina kunaka kubva kune vatengi), uye POP (Perfect Order Percentage - yepamuko yehuwandu hwekubudirira zvakakwana kununura pasina chero mutengi kubatsiririra).
Pano pane mamwe matanho chaiwo aunoda kutora kuti uwane Bhokisi Rekushandisa muAmazon.
1. Chokutanga pane zvose, ita kuti iwe unokodzera - chinhu chacho ndechokuti chigadzirwa chako chinofanira kugara chiri neAININ chaiyo chaiyo neimwe rondedzero yaunoda zvinowanikwa mazviri. Uyezve, chengetedza kana uchiri kuita zvakanaka neChechi yeBhodhi yakatotaurwa kare.
2. Chechipiri, iwe unogona kuderedza mutengo wako zvishoma-uchipiwa kuti iwe unokodzera, mari inowanzova yega chinokonzera kubudirira mune zvemabhizimisi chipo chako. Taura zviri nyore, zvose zvaunoda ndezvekuziva nezvemutengo wemakwikwi ako, uye ugovapa imwechete yepakati - uye wapedza.
3. Pakupedzisira, kuwana chiratidzo chakasiyana-siyana cheruvara chinoratidza kuti Kuzadziswa neAmazon kune FBA yako yekutengesa mazita kunogona kuvandudza Amazon yako yekutengeserana data pane imwe nzvimbo. Nenzira iyo, iwe unorayirwa kuti ubatanidze nayo pachako uye uwane ruzivo rweAmerica Prime listings - chikonzero ichi chakakwana chakavakirwa kukurudzira vatengesi kuti vafunge pane bandwagon uye vatange kuwana mimwe mibayiro.